कसले भन्छ यी बच्चीलाई १९ बर्षकी ? - Nepal News - Latest News from Nepal
कसले भन्छ यी बच्चीलाई १९ बर्षकी ?
माथिको तस्वीर हेर्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ- यी तीन चार बर्षकी बालिका हुन् । तर, अचम्म नमान्नुहोस् यीनको उमेर १९ बर्ष पुगिसकेको छ र यी पूर्ण बयस्क युवती हुन् ।
भारतको बैंगलोरकी यी युवती हुन् गिरिजा श्रीनिवास । वास्तवमा उनी एउटा दुर्लभ रोगको सिकार बनेकी छिन् जसको कारण उनको उमेर बढेता पनि शरीकको आकार भने बढेको छैन । हड्डी राम्रोसँग बिकाश नभएका कारण उनी युवती भइसके पनि बालिकाजस्तै छिन् ।
अहिले उनको उचाइ २.५ फिट छ भने तौल जम्मा १२ केजी । शरीरको अनुपातमा टाउको ठूलो भएको कारण उनी बस्न र उभिन सक्दिनन् । शारीरिक असक्षमताका कारण गिरिजाको हेरचाहा गर्न उनकी आमा दिनभर घरमै बस्छिन् ।
शारीरिक असक्षमताको बाबजुत पनि गीरिजा आफ्नो कलाको माध्यामबाट आफ्नो धर परिवारको आर्थिक स्थिति धानेकी छिन् । हरेक महिना उनी पाँचदेखि छ वटा विभिन्न किसिमका चित्रहरु बेचेर आठ हजारदेखि दशहजारसम्म कमाउँछिन ।
गिरिजा जन्मिने वित्तिकै चिकित्सकहरुले उनको शारीरिक वनोट नबढ्ने बताएपछि बाबु आमा विक्षिप्त बनेका थिए । उनको शरिरिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर र सिथिल छ जसका कारण उनलाई कहिलेकाहीँ श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउने गरेको छ ।
सन्नी भन्छिन्-‘गर्भवती हुने समय छैन’
बन्द रहेको कुमारी हल संचालनमा
पृथ्वीका सबै मानिसलाई माकुराले खाइदिन सक्छ अनौठो तथ्य सार्वजनिक, मानव नष्ट यही कारण !
न्युजिल्याण्डमा एउटा समूहले सरकार विरुद्ध आची आन्दोलन सुरु गरे